Atletico madrid oo kaga cad cad barcelona iyo Real madrid ku guuleysiga La Liga.
Home Horyaalka Spain Atletico madrid oo kaga cad cad barcelona iyo Real madrid ku guuleysiga...
Horyaalka dalka spian ee La liga ayaa sanadkaan ka xiiso badan sanadihii hore iyadoo ay ka taalo kooxa ugu tunka weyn spian ee kala ah barcelona iyo Real madrid waxaana waqti iyo waayo fiican ku jirto Atletico madrid.
guushii Real madrid ee isbuucaan ka gaartay kooxda Huesca iyo guushii xalay ay kooxda barcelona ka gaartay Real betis oo ay ku booqdeen gurigood ayeey guul 3-2 ah ka gaareen.
Hogaamiyasha sanadkaan Atletico madrid ayaa caawa gurigooda kusoo dhaweyn doonto kooxda celta vigo caawa shan saac kooxda Atletico ayaa xiligaan ka sareysaa 7 dhibcood kooxah barcelona iyo Real madrid laakin hadii badiyaan waxaay ka sari doonaan 10 dhibcood sidoo kale kulan kale ayeey gacanta ku heystaan oo baaqi ah.
Real madrid iyo barcelona waxa ay wada leeyihiin min 43 dhibcood waxaana ay kuwada jiraan kaalinta labaad wallow farqiga goolasha barcelona ku horeyso.
Previous articlePSG oo ku dagaalameysa Romelo Lukaku.
Next articleJose Mourinho oo Raba in qandaraaska loo kordhiyo Son Heung-min